iMovie bụ ihe nkiri bụ a Mac ngwa na-enye ohere Mac ọrụ mbubata na dezie ha videos. Ọ nwere ọtụtụ atụmatụ ma ka ọ bụla ọzọ Apple ngwaahịa, ọ na-ahọrọ ihe na-adịghị dị nnọọ na ihe ọ bụla e nyere ya. iMovie nanị na-akwado a mmachi video format ị nwere ike mbubata ọ bụ dezie. Edezi iMovie abụghị akwado usoro-achọ ka ị tọghata video na iMovie dakọtara format tupu edezi video.
iMovie akwado Formats
QuickTime akwado MOV
High Definition Video (HDV) 1080 m, HDV 720 P
DV-Standard faịlụ formats
Olee otú mbubata WMV ka iMovie on Mac
Importing a WMV faịlụ Ọkpụkpọ ka iMovie on Mac gaghị arụ ọrụ n'ihi na WMV bụghị n'etiti iMovie dakọtara formats. Ya mere, ị pụghị dezie a WMV faịlụ na iMovie kpọmkwem na-enweghị converting na WMV na iMovie dakọtara format dị ka MOV faịlụ Ọkpụkpọ. Ụzọ kasị mma mbubata WMV usoro iMovie bụ site na iji Wondershare Video Converter Ultimate iji tọghata video na iMovie dakọtara usoro. E nwere ndị ọzọ softwares i nwere ike iji tọghata WMV ka iMovie dakọtara format, ma Wondershare Video Converter Ultimate bụ nnọọ ihe kasị mma.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ kasị video Ntụgharị dị na ahịa. Ọ bụkwa otu nke kasị mma video converters si n'ebe na nza nke atụmatụ na functionalities. Wondershare Video Converter Ultimate Nwere nnọọ mfe ma dị mfe iji interface maka beginners. Na Wondershare Video Converter Ultimate ị na-adịghị mkpa iji kwụọ ụgwọ onye dezie gị videos professionally n'ihi na ị pụrụ ime ugbu a ya onwe gị. Ọ na-ekwe ka ndị ọrụ na dezie videos, tinye mmetụta, tinye watermark ka videos na ọtụtụ ndị ọzọ.
Atụmatụ nke Wondershare Video Converter Ultimate
Akakabarede na Wondershare Video Converter Ultimate-eme na àgwà nke gị video emebibeghị, na-enweghị ibelata ma ọ bụ tempering na àgwà.
Wondershare Video Converter Ultimate Nwere a dịgasị iche iche nke mmepụta formats ịhọrọ site na mgbe converting ọ bụla video.
Wondershare Video Converter Ultimate Enye ọrụ na nhọrọ họrọ ụdị nke ngwaọrụ ha chọrọ iji tọghata video maka iji na-enweta kacha mma mma n'ihi na ngwaọrụ.
Mgbe ọ na-abịa ngwa ngwa video akakabarede, Wondershare enye kasị video akakabarede ọsọ na a ọsọ ruo 30 ugboro karịa ndị ọzọ video converters.
Wondershare Video Converter Ultimate Anaghị akwụsị na video akakabarede naanị; ọ bụkwa ya na-enye ohere download nke vidiyo si na YouTube, Vimeo, Google video na ndị ọzọ na video nkekọrịta na saịtị na dị nnọọ a click nke a bọtịnụ.
Na Wondershare Video Converter Ultimate ọrụ ike ịmepụta MP3 faịlụ site a DVD ozugbo enweghị ihe ọ bụla hassle.
Gịnị bụ WMV?
WMV bụ ihe acronym maka Windows Media Video mepụtara Microsoft. Nke a video faịlụ bụ na ndabere nke Microsoft Advanced Systems Format (ASF) akpa Ọkpụkpọ na abịakọrọ na Windows Media mkpakọ; yiri a .asf faịlụ na-agụnye video koodu na otu nke Microsoft Windows Media Video (WMV) proprietary codec. Ọ bụ a faịlụ ụdị nke pụrụ ịgụnye video n'etiti ọtụtụ video mkpakọ formats. Mbụ video mkpakọ format dị na faịlụ, na-akpọ WMV, na mbụ mere maka Internet gụgharia omume. Ndị kasị ewu ewu softwares na-akwado WMV bụ Microsoft Windows Video, Microsoft Windows Media Player, VLC Media Player, wdg
Iji tọghata WMV ka iMovie dakọtara format na iji Wondershare Video Converter Ultimate, na-eso nzọụkwụ n'okpuru
Nzọụkwụ 1: Mbubata WMV video ka Wondershare Video Converter Ultimate Ohere.
Nzọụkwụ 2: Họrọ mmepụta format ị chọrọ. Na nke a, anyị ga-họrọ MOV ebe ọ bụ iMovie dakọtara usoro.
Nzọụkwụ 3: See tọghatara bọtịnụ na ala nke window na-amalite akakabarede.
Nzọụkwụ 4: Mbubata converted video ka iMovie na-amalite edezi gị video.
Gịnị mere a WMV video faịlụ-apụghị dị ka iMovie?
Ọ bụrụ na ị maara na Apple ngwaọrụ, ị mara na ha ka ha ụkpụrụ na-echesinụ mgbe ọ na-abịa ihe ha ngwaọrụ-na. iMovie itịbe ịbụ onye na-Apple ngwaahịa na Ya mere, o nwere na anaghị ewere kwa. Ọ na-akwado nanị ole na ole video formats ma ọ bụla ọzọ video format ga-arụ ọrụ na ya. The formats akwado bụ QuickTime MOV, MPEG-4, na High Definition Video (HDV) 1080 m, HDV 720 P, DV-Standard faịlụ formats, camcorder (AVCHD) na iSight. Site ndepụta kwuru, ị pụrụ ịhụ na WMV video faịlụ a adịghị depụtara na Ya mere ọ na-adịghị akwado site na iMovie.
Gịnị bụ iMovie Ò Kwekọrọ n'Ozizi Formats?
Dị ka aha-ada, ndị a bụ formats na-dakọtara na iMovie ngwa na Mac. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọ bụla nke formats, na iMovie ga mbubata gị video na-ekwe ka ị dezie video n'ụzọ ị chọrọ.
Gịnị bụ iMovie Non-Ò Kwekọrọ n'Ozizi Formats?
Ọ dị mfe, ndị a bụ formats na-adịghị dakọtara na iMovie na video-apụghị dezie na iMovie ngwa. N'agbanyeghị otú ike ị na-agbalị mbubata ọ bụla nke na-abụghị dakọtara formats ka iMovie, ọ ga-mbubata ma ọ bụ ị ga-enweta ihe njehie ozi. Dezie ọ bụla nke iMovie-abụghị dakọtara formats, i kwesịrị iji tọghata video na iMovie dakọtara usoro. Otu nke kasị mma software na-eme na ka atụle site ná mmalite nke isiokwu bụ ndị Wondershare Video Converter Ultimate.
Ụfọdụ iMovie-abụghị dakọtara formats bụ: FLV, WMV, AVI, WMV, MKV, MPEG, VOB, MOV, AVCHD, MTS, M2T, M2TS, Tod, MOD, XAVC, wdg
Downlaod ọ bụla Version nke iMovie - ebe a na ọ bụ!
Olee otú Mepụta Movie Trailers na iMovie
> Resource> iMovie> Olee mbubata WMV ka iMovie